HHO Kit HHO ကား၊ ထရပ်ကား Plug-N-Play ဟိုက်ဒရိုဂျင်စုဆောင်းသောလောင်စာ - www.HHOKIT.ie
အားလုံးအမျိုးအစားများ ------ 1/4 ဝက်အူချည် 8mm L ကိုလျောက်ပတ် 8/mm BSPT / NPT အတွက် 1mm L L Air Int တံတောင်ဆစ်ဖိအား 8mm amp 3A / 15A DIY ARCWLSD 30A BUBBLER id8mm 1/4 "PT CAP-PU-8mm CO-EX-PU-8mm မှန် CT PWM 66W 30A DWT CABLE Débardeur BIO - BandC - DTG EX-PU-8mm ကျန်းမာရေးအတွက် H2 HHO 3D တံဆိပ် HHO 3X 54C XXL STX Mk3 HHO ECC 1000T HHO ECC 1500T HHO ECC 2000T HHO ECC 3000T HHO ECC 600T HHO ECC 800T HHO IX 10C Mk2 2020 HHO IX 12C Mk2 2020 HHO IX 18C MK3 2021 HHO IX 6C Mk2 2020 HHO IX 8C Mk2 2020 HPU8-5mm Koh 250g L-PU-8mm LCD 4-In-1 non- ပြန်လာအဆို့ရှင် 8x5 Push PCUB-08 PNP အဆင့်မြှင့်တင် ပြန်သုံးနိုင်သောမျက်နှာဖုံး သိမ်းဆည်းခြင်း chip ကို ခရမ်းလွန်ပိုးသန့်ဆေး ခရမ်းလွန်မီးအိမ် vakum စနစ် 1 / 4OD8MM အားလုံးအမျိုးအစားများ
ကားများ၊ SUVs များ၊ ဗင်ကားများအတွက် HHO ပစ္စည်းများ 4L အထိ
HHO ကုန်တင်ယာဉ်များ၊ လှေများ၊ ဘတ်စ်ကားများအတွက်အင်ဂျင် 8L အထိတပ်ဆင်ထားသည်
ကျန်းမာရေးအတွက် H2၊ မိုဘိုင်းပိုးသတ်စက်
Lexus IS220 ၃.၉L / ၁၀၀ ကီလိုမီတာ - ၇.၆L / ၁၀၀ ကီလိုမီတာ GOLD iX3.9 HHO Kit ဖြစ်သည်
Mercedes C200 4.2L / 100km 62mpg - ၆.၈ ကီလိုမီတာ / ၁၀၀ ကီလိုမီတာ GOLD iX6.8 HHO Kit
HHO ဗီဒီယိုအားလုံး HHO X-CELL
လောင်စာဆီချွေတာမှုအတွက် Pepsi 15%
နာဆာ H2 မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မိုးရွာရွာစေသည်
မှ 299,40 €
၁၀၀၀ စင်တီမီတာအထိ All-In-One Plug-N-Play ကားအင်ဂျင်အတွက် HHO Kit iX100
၅ မိနစ်အတွင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ HHO generator5X-Cells, PWM, level sensor ပါသည့်ရေတိုင်ကီ၊ Bubbler, Display, Smart relay volta ...
မှ 319,40 €
၁၀၀၀ စင်တီမီတာအထိ All-In-One Plug-N-Play ကားအင်ဂျင်အတွက် HHO Kit iX200
မှ 339,40 €
၃၅၀၀ စင်တီမီတာအထိ All-In-One Plug-N-Play ကားအင်ဂျင်အတွက် HHO Kit iX300
မှ 359,40 €
၁၀၀၀ စင်တီမီတာအထိ All-In-One Plug-N-Play ကားအင်ဂျင်အတွက် HHO Kit iX400
မှ 4,75 €
HHO ဗီဒီယိုများ၊ HHO လက်စွဲများ၊ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုလေ့လာပါ။ Package 250g, 500g - ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်အတွက်လုံလောက်ပါတယ်။
မှ 169,40 €
HHO ကိရိယာ HHO Generator iX100 All-In-One ကားများ၊ ဗင်ကားအင်ဂျင်များအတွက် 0.5-1.0L DIY
HHO ကိရိယာ iX100 DIY PWM၊ ရေလှောင်ကန်၊ အဆင့်အာရုံခံကိရိယာ၊ အင်ဂျင်အတွက် Bubbler 0.5-1.0L အင်ဂျင်များနှင့်ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ အမျိုးအစားများအတွက် HHO ကိရိယာ 5-In-1 ...
မှ 199,40 €
HHO ကိရိယာ HHO Generator iX200 All-In-One ကားများ၊ ဗင်ကားအင်ဂျင်များအတွက် 1.0-2.5L DIY
HHO ကိရိယာ iX200 DIY PWM၊ ရေလှောင်ကန်၊ အဆင့်အာရုံခံကိရိယာ၊ Bubbler အင်ဂျင် ၁.၅ မှ ၂.၅ လီတာအင်ဂျင်များနှင့်ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊
မှ 219,40 €
HHO ကိရိယာ HHO Generator iX300 All-In-One ကားများ၊ ဗင်ကားအင်ဂျင်များအတွက် 2.5-3.5L DIY
HHO ကိရိယာ iX300 DIY PWM၊ ရေလှောင်ကန်၊ အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာ၊ Bubbler ၂.၅-၃.၅.၅ အင်ဂျင်နှင့်ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊
မှ 249,90 €
HHO ကိရိယာ HHO Generator iX400 All-In-One ကားများ၊ ဗင်ကားအင်ဂျင်များအတွက် 3.5-4.5L DIY
HHO ကိရိယာ iX400 DIY PWM၊ ရေလှောင်ကန်၊ အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာ၊ Bubbler ၃.၅-၄.၅ လီတာအင်ဂျင်များနှင့်ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ လှေများအားလုံးအတွက် HHO ကိရိယာ 5-In-1 အပြည့် ...
မှ 89,00 €
သင်၏ HHO Kit HHO X-CELL DIY ကို Plug 'N Play သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
HHO ဗီဒီယိုများ၊ HHO လက်စွဲများ၊ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖြင့်သင်၏ HHO Kit X-CELL DIY ကို ARWLSCD ဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်း - ရေအဆင့် S နှင့်အလိုအလျောက် relay များဖြင့်အဆင့်မြှင့်ပါ။
HEC - ကားများအတွက် Hho Efie Chip Plug-N-Play
စွမ်းဆောင်ရည် HEC - (HHO EFIE CHIP) USB ပရိုဂရမ်မာနှင့်အတူ Microprocessor Plug-N-Play သည်လောင်စာချွေတာမှုကို ၄၀၀၀+ မြေပုံအင်ဂျင်များတွင်အချိန်မရွေးတိုးစေသည်။ ဘယ်လိုနေလဲ ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အသစ်စက်စက်အရွယ်အစား: G1 /4ပစ္စည်း: HSSQuality သံမဏိ၊ သက်တမ်းရှည်သည်ချွန်ထက်။ ကောင်းမွန်သောချစ်ပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြတ်တောက်သည်။ တိကျသောထုတ်ကုန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ...
HHO X-CELL Mounting ID အတွက် ၈၀၀ မီလီမီတာ Push-In Fittings 100 Adapters ၁.၄ မီလီမီတာ Bubbler အတွက် NPT / BSPT ချည်ထိုး Bubbler 8ml ကိုခေတ်မီပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
Smart Relay ထိန်းချုပ်မှုစနစ် DC6-80v 20A / 30VDC သို့မဟုတ် 30A-250VAC
စမတ် relay နှင့်ရေအဆင့်ထိန်းချုပ်မှု DC6-80v 20A / 30VDC သို့မဟုတ် 30A-250VAC HHO ဗီဒီယိုများ၊ HHO လက်စွဲ၊ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်ပိုမိုလေ့လာပါဗို့အား ...
HHO ဗီဒီယိုများ၊ HHO လက်စွဲများ၊ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ LCD Display ဖြင့်ပိုမိုလေ့လာပါ 6.5-100VDC 20A 4-In-One ဗို့အား | လက်ရှိ | ပါဝါ စွမ်းအင် DC ဒီဂျစ်တယ်ဝပ်မီတာထုတ်လုပ် ...
HHO သည် 4.5L Plug-N-Play အထိပစ္စည်းများ
HHO သည် 8L Plug-N-Play အထိပစ္စည်းများ
3000 LPH 50LPM - HHO ECC စက်များ - အင်ဂျင်ကာဗွန်သန့်ရှင်းရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ HHO အထွေထွေ X-CELL ALL-IN-ONE PLUG-N-PLAY ပစ္စည်းများနှင့်အတူလောင်စာသိမ်းဆည်းပါ ၅ မိနစ်အတွင်းအသုံးပြုရန်အသင့်ဖြစ်
HHO Factory, Ltd - HHO ပစ္စည်းများ All-In-One Plug-N-Play အိုင်ယာလန်ဥရောပသမဂ္ဂထုတ်လုပ်ခြင်း။ ,
ငါဒီ hho စူပါကိုဝယ်လိုက်ပြီ။ အားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာအစုံ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
HHO VIP လက်ထောက် professional ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီအတွက်သင့်ကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်
John Sligo ထုတ်လွှတ်မှုစမ်းသပ်မှု
ကိုယ့်ရဲ့ nct emission test ကိုအခုပဲလုပ်ပြီးပြီ။ မင်းကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကိုမင်းကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်
လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာကိုသင်ငြီးငွေ့နေသလား။ သင့်ကား၏ ၃၀% နှင့်အထက်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချလိုပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်မှန်ကန်တဲ့အရပ်သို့ရောက်လေပြီ!
လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာကိုသင်ငြီးငွေ့နေသလား။ သင့်ကား၏ ၃၀% နှင့်အထက်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချလိုပါသလား။ ထို့နောက်သင်သည်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။
HHO-FACTORY, Ltd. သည်လောင်စာများစွာစုဆောင်းရန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ချွေတာနိုင်သည့် ALL-IN-ONE စနစ်အသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
သမားရိုးကျလောင်စာကိုသုံးပါ။ ၎င်းကိုဟိုက်ဒရိုဂျင် (oxyhydrogen) စွမ်းအင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ PLUG-N-PLAY ပါ ၀ င်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ALL-IN-ONE စနစ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအခြားကားတစ်စီးအတွင်းနှင့်အပြင်သို့တပ်ရန်မလိုအပ်သောအမြန်ဆုံးနှင့်အသိဉာဏ်ရှိသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ system အလုပ်လုပ်ပုံသည်၎င်းသည်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်ရှိလျှပ်စစ်ဓါတ်သည်အောက်ဆီဂျင် (O) မှရေ (H2) ကိုကွဲစေပြီးဤဖြစ်စဉ်မှထုတ်လုပ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင် (အောက်စီဂျင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်) ကိုအင်ဂျင်၏လေထဲကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သည်။
Electrolytic gas (hydrogen) သည်ပိုမိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်လောင်စာဆီလုံးဝနီးပါးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်များနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များလည်ပတ်သော LPG မော်တော်ယာဉ်များအတွက်စနစ်သည်တူညီသည်။
ယာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသော ALL-IN-ONE PLUG-N-PLAY စနစ်အားအထူးကြိုတင်အသိပညာမရှိပါ။ အပြန်အလှန်လက်စွဲစာအုပ်၌ရှိသကဲ့သို့ပုံဖော်ထားသည့် mounting ညွှန်ကြားချက်များသည်အလွန်မှတ်မိလွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်က X ဆဲလ်များ
Active HHO ကာဗွန်သန့်ရှင်းရေး (HHO Kit) ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏လက်တွေ့ကျသောရလဒ်မှာအသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့၏အင်ဂျင်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လောင်စာဆီသက်သာစေရန်အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HHO X-CELL မီးစက်များဖြင့်သင်စွမ်းအင်သို့မဟုတ်လောင်စာချွေတာရန်သင်၏ ECU ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် (electrochemically decomposed water မှရရှိသော) ဟိုက်ဒရိုဂျင် - အောက်စီဂျင်ရောနှောမှု၏သြဇာကိုအကဲဖြတ်ရန်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးဆလင်ဒါတစ်ခုတည်းတိုက်ရိုက်ဆေးထိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်တစ်ခု၏လေထဲသို့ ၀ င်သည်။ သုတေသနပြုချက်အရဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဆလင်ဒါဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်သမားရိုးကျလောင်စာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏သာလွန်သောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေသည်။
NASA သုတေသနလေ့လာမှုကို download လုပ်ပါ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေ့လာမှုများအရဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်များထဲသို့ထည့်ခြင်းသည် CO2ထုတ်လွှတ်မှုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
ပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းသောအင်ဂျင်သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းမှတစ်ဆင့်ဓာတုစွမ်းအင်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလောင်ကျွမ်းသောအခန်းထဲတွင်တွေ့ရှိပြီးလောင်စာဆီနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ပူပြင်းလောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့၏အပူတိုးချဲ့ပစ္စတင်ရွေ့လျားနေသည်။ ရရှိလာတဲ့စွမ်းအင်သည်ကားကိုစွမ်းအားရှိသည်။
လူသိများသောလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်များဥပမာကားများ၌ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်များဖြစ်သည်။ ထိရောက်သောအင်ဂျင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးသောလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်ပစ္စတင်သည် TDC သို့ရောက်သောအခါဖြစ်သည်။ (TDC = ထိပ်တန်းသေတ္တာစင်တာ၊ ဆလင်ဒါတွင်အမြင့်ဆုံးပစ္စတင်အနေအထား) သို့သော်အင်ဂျင်အများစုသည်စောလျင်စွာလောင်ကျွမ်းသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလောင်စာသည်လုံးဝလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်လောင်စာဆီပိုမိုသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော CO2 ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု! လောင်စာ - လေအရောအနှောအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (အောက်စီဂျင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့) ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ပစ္စတင်ပေါ်တွင်ဖိအားပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်လောင်စာဆီကိုပိုမိုထိရောက်စွာလောင်ကျွမ်းစေပြီးလောင်စာစုဆောင်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနည်းစေပါသည်။
HHO X-CELL ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
၁။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်မြို့ပြအသွားအလာတွင်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု ၃၀% နှင့်အထက်အထိလျှော့ချပါ။
3. CO2ထုတ်လွှတ်မှုနည်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ပိုကောင်းသည်။
ဤ HHO Carbon Cleaning လုပ်ဆောင်မှုသည်သင်၏အင်ဂျင် 'Clean as အသစ်' အခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။
အိုင်ယာလန်အခြေစိုက် HHO FACTORY Ltd. သည်ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချသောဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာများပို့လွှတ်ရာတွင်အထူးပြုသည်။ HHO မီးစက်များသည်အင်ဂျင်နိမ့်များတွင်အလွန်ထိရောက်စွာလည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းတွင်ဆန်းသစ်သည်။ အဓိကဒီဇိုင်းသည်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင်၏အင်ဂျင်ကိုအတွင်းပိုင်းမှသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေများကို HHO စက်ရုံ HHO Generator ၌သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် Plug-N-Go အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သောအသုံးပြုရန်အရည်အသွေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုသင်အပြည့်အဝစမ်းသပ်ပြီးအပြည့်အဝသုတေသနပြုပါလိမ့်မည်။ ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းရှိပြီးတိကျမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်း၊ အားလုံးပြည့်စုံသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာစမ်းသပ်မှုနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ HHO စက်ရုံ HHO Generator တိုင်းသည်သင်မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဗွီဒီယိုများအရတိတိကျကျလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ HHO Generator ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့် 'Plug n' Play 'ယူနစ်များအားလုံး EU ကို EUIPO - European Union Intellectual Property Office မှကာကွယ်ထားသည်။
အဘယ်ကြောင့် HHO Kit ကိုထိရောက်သော Active HHO ကာဗွန်သန့်စင်သူအဖြစ်ဖော်ပြသနည်း။
Active HHO ကာဗွန်သန့်စင်စက် (HHO Kit) ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏လက်တွေ့ရလဒ်မှာအသုံးပြုသူများကမိမိတို့၏အင်ဂျင်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လောင်စာဆီသက်သာစေရန်အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HHO X-CELL မီးစက်များဖြင့်သင်စွမ်းအင်သို့မဟုတ်လောင်စာချွေတာရန်သင်၏ ECU ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံများစွာသည်ဒေတာများကိုကိုင်တွယ်ရန်မည်သည့်ချစ်ပ် (သို့) အာရုံခံကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ထားပြီး၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်သက်တမ်းတိုစေခြင်း၊ ရှေးဟောင်းဒီဇိုင်းကိုမလိုအပ်ဘဲ HHO ဆဲလ်များမစမ်းသပ်ဘဲစမ်းသပ်ပြီးမဟုတ်သော၊ မကျွမ်းကျင်သော HHO ဆဲလ်များနှင့်မပတ်သက်ရန်သင်ဂရုစိုက်ရမည်။ ၎င်းကိုသိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခြင်းမပါဘဲတည်ဆောက်လေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်အသုံးမ ၀ င်သောကြားနေပြားများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အသိပညာဗဟုသုတကင်းမဲ့မှုကိုကျော်လွှားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာပန်းကန်များသို့ပို့လွှတ်သည့်အမ်ပန်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီနှင့် alternator သည်ဤ current ကိုထောက်ပံ့ရန်ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး HHO ဓာတ်ငွေ့မှရရှိသောမည်သည့်စုဆောင်းမှုကိုမဆို alternator ကိုမောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကသင့်ရဲ့ alternator နှင့်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တိုတောင်းသောအလုပ်လုပ်သက်တမ်းရှိသည်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အိုကေ! ဒါဆိုးတာပဲ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုသိဖို့လိုတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့မသင့်တော်တဲ့တခြား HHO Generators တွေရှိနေလို့ပဲ။
HHO စက်ရုံ၌သင့်အတွက်သတင်းကောင်းရှိသည်။ အာမခံပါသည်
သင်နှင့်သင်၏အင်ဂျင်အတွက်အဓိကအကျိုးရှိမှုမှာထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေသောသင်၏အင်ဂျင်၏ထိရောက်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ HHO စက်ရုံသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တီထွင်။ HHO FACTORY, LTD မှထုတ်လုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ HHO X-Cell Generator HHO ပစ္စည်းများရရှိသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများသည်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း၊ စွမ်းအင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားအင်ဂျင်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုရရှိရန် ၂၀၀ မီတာမှ ၁.၅ အေမှအလွန်နိမ့်သော current ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းမှာ HHO FACTORY ၏စွဲမက်ဖွယ်သုတေသန၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စွဲမြဲသောဒီဇိုင်းတိုးတက်မှုတို့ဖြစ်သည်
HHO Generator သည် ionized ရေကိုအောက်စီဂျင်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သို့ hydrolyzes ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည်သင်၏လောင်ကျွမ်းသောအရောအနှောများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး၎င်းကိုလုံးဝလောင်ကျွမ်းစေသည်။ HHO ဓာတ်ငွေ့သည်သင်၏လောင်ကျွမ်းသောအခန်းအတွင်းရှိမီးလျှံများပျံ့နှံ့မှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ လောင်ကျွမ်းရန်အချိန်ပိုမိုပေးသည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းသည်ချက်ချင်း စတင်၍ ပိုမိုလောင်ကျွမ်းသောကြောင့်) ပိုမိုလောင်ကျွမ်းသောလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဤသို့တိုးမြှင့်သောထိရောက်မှုသည်သင်၏လောင်စာဆီမှပိုမိုစွမ်းအင်ကိုရရှိစေသည်၊ လက်ကိုင်အလှည့်တစ်ခုချင်းစီကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုညင်ညင်သာသာရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ် ပို၍ မောင်းနှင်ပါကသင်၏အင်ဂျင်သည်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေနိုင်သည်။ သငျသညျကြီးမားသော HHO ဓာတ်ငွေ့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ဖြစ်နိုင်သမျှအထိရောက်ဆုံးနှင့်တိကျသောထုံးစံ၌ဖြန့်ဝေမှန်ကန်သောပမာဏကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါ HHO X-Cell Generator HHO ကိရိယာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏အင်ဂျင်၏စွမ်းဆောင်ရည်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်စစ်ဆေးရန် acceleration app ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ ထို့ကြောင့် HHO Generator ကိုသင်အင်ဂျင်နှင့်အမှန်တကယ်ကွာခြားမှုကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေသော ၀ ယ်ယူထားသည်မှာသေချာသည်။
HHO Gas (Hydrogen & Oxygen) သည်လောင်ကျွမ်းသောအခန်းထဲတွင်လောင်ကျွမ်းပြီးရေထဲသို့ပြန်လှည့်သည် (H2O), သို့သော်လောင်ကျွမ်းသောအခန်းတွင်အလွန်အမင်းပူသည်၊ ရေသည်အပူလွန်ကဲသောရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်စူပါရေပူငွေ့ဖြစ်လာသည်။ သင်၏မီးခိုးငွေ့မှထွက်လာသောကြောင့်ရေငွေ့သည်မမြင်ရသောကြောင့်သင်လမ်းပေါ်သို့မောင်းနှင်နေစဉ်သင်သည်မုန်တိုင်းကြီးကြီးမားမားမဖြစ်စေရပါ။
UP Sign - သတင်းလွှာ
* အားလုံးစျေးနှုန်းများ 23% VAT ကိုပါဝင်သည်။
VAT မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ထားသောအီးယူကုမ္ပဏီများအတွက်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
မူပိုင်ခွင့်© 2021 www.HHOKIT.ie ။
العربية English Français Deutsch Polski Português Русский